दाङका व्यापारी अपहरण र हत्या अभियुक्तहरु जेल चलान
नारायण खड्का दाङ, साउन २७
दाङका व्यापारीको अपरहण तथा हत्या काण्डमा सम्लग्न ११ जना अभियुक्तहरुलाई अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । दाङका व्यापारीहरु राजकुमार श्रेष्ठ र रणबहादुर घर्तीको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ११ जना कारागार चलान भएका हुन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ का ३४ वर्षीय खुमबहादुर केसी, तुलसीपुर १२ का २५ वर्षीय अविरल महतारा, तुलसीपुर ६ का २३ वर्षीय रुगत थापामगर, तुलसीपुर ८ का २८ वर्षीय भुपेन्द्र भण्डारी, तुलसीपुर–६ की १९ वर्षीया पुजा घर्तीमगर, उनका बाबु ३४ वर्षीय टिकाराम घर्ती मगर, तुलसीपुर ९ का ४० वर्षीय नारायण वलीलाई जिल्ला अदालत सल्यानले पुर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
व्यापारीको अपहरण र हत्या आरोपीमध्ये नौं जना तुलसीपुरकै रहेका प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी, व्यापारी श्रेष्ठ र घर्तीको हत्या र अपहरण काण्डमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का ४० वर्षीय रमेश भनिने मनबहादुर पुन,घोराही १४ का ३८ वर्षीया जमा पुन, दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. ५ का ३८ वर्षीय मानबहादुर भण्डारी, दाङको साविक कोर्चाबाङ गाविस वडा नं. १ निवासी ४० वर्षीय विरे घर्तीलाई पनि जिल्ला अदालत सल्यानले पुर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
पक्राउ परेकाहरुलाई प्रहरीले, बाँके, काठमाडौं , पोखरा र भारतको चन्डीगढ लगायतका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न समयमा पक्राउ गरेको थियो। जेठ २६ गते साँझ युवतीको प्रयोग गरी राजकुमार श्रेष्ठको नाटकीय ढंगले अपहरण गरिएको थियो । अपहरणको तीन दिन पछि जेठ २९ गते व्यापारी श्रेष्ठ र घर्तीको एकैदिन हत्या गरेको पक्राउ परेकाहरु बयान दिएको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको थियो ।
व्यापारको सिलसिलामा रुकुम जाँदै गरेका रणबहादुर घर्तीे अनाहकमा अपहरणपछि हत्या गरिएका थिए । सल्यानको जंगलमा राजकुमार श्रेष्ठको जीप ढुकेर बसेका अपहरणकारीले घर्ती त्यहाँ पुग्दा उनलाई पनि अपहरण गरेका थिए । तर, घर्तीले अपहरणकारीलाई चिनेकै कारण पोल खुल्ने त्रासले उनको हत्या गरेको बयान प्रहरी समक्ष दिएका थिए ।
हत्या गरिएका घर्ती र अपहरणमा हाल जेल चलान भएका व्यक्ति त्यसअघिसँगै जेल परेको हुँदा घर्तीलाई छोड्दा पोल खुल्ने भएपछि उनको पनि हत्या गरेको खुल्न आएको प्रहरीले बताएको छ । श्रेष्ठ र घर्ती दुवै व्यापारीको शव सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित झिम्पेको लेक भञ्ज्याङको घना जंगलमा फेला परेको थियो । श्रेष्ठको शव असार १६ गते र घर्तीको शव असार २७ गते फेला परेको थियो । अदालतको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अभियुक्तहरु अब कारागारमै रहनेछन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २७, २०७४, ०१:२२:४७